Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguMirian
Ingumgangatho wesibini, ozolileyo, onezinto eziyimfuneko ukuze ungadingi nto kwaye ukhululekile ngexesha lokuhlala kwakho. Indawo inamagumbi amathathu apho amabini aya kufumaneka xa ubhukisha abantu aba-4 kubantu aba-5 ukuya phambili senza ukuba igumbi lesithathu libe ngaphezulu kweedola ezi-5 ngobusuku. Okanye ukuba umxhasi ufuna igumbi lesithathu, kufuneka batsho kwangethuba kwaye songeza i-$5 ngobusuku ngabunye kwixabiso elisisiseko lika-Airbnb.
Indawo phakathi kweRecidencial ekhuselekileyo, enokhuseleko lweyure ezingama-24, iphuli yokupaka kunye nendawo yokupaka iiViciantes, ukuyila kwakhona kwaye uzole, kwaye ukuba uthanda ibhola yomnyazi, sinenkundla yokudlala. Ziyeke uhambe
\_u00A0Iibhedi ezinkulu eziyi-2, iibhedi ezincinci eziyi-2
4.73 · Izimvo eziyi-15
Le ndlu ibekwe eSantiago De los Caballeros, eCarretera Licey, eLas Palomas Santiago, Iprojekthi ingaphantsi kweemitha ezingama-500 ukusuka eNorth Beltway ekuvumela ukuba ube nokufikeleleka kuyo yonke iSantiago, ngaphandle kokuba ube ngaphakathi kwiiplagi ezidumileyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Mirian
Ukuba ngaba kubalulekile ukuba kukho ingxaki iindwendwe ziqhagamshelane nam okanye umntu ophetheyo ukuba andifumaneki, abathengi baya kuhlala benenombolo yomnxeba yomphathi wam.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Santiago De Los Caballeros